Spotify ikozvino yaenderana naSiri pane iyo Apple Tarisa | Ndinobva mac
Spotify ikozvino inotsigira Siri paApple Watch
Spotify achangobva kuburitsa vhezheni nyowani kuti Siri ienderane paApple Watch. Neiyi nzira, vhezheni 8.5.52, pamusoro pekuwedzera kuwedzeredza kwakasiyana uye kugadzirisa bug kune iko kushanda, inobvumira Apple Watch ku neWatchOS 6 zvichienda mberi inowirirana naSiri.
Nenzira iyi tinogona kusimudza ruoko neApple Watch uye tobvunza izvo Spotify kubereka mimhanzi yatinoda nekuraira. Izvo zvinokwanisika kukumbira chese chinhu chatinoda zvinonzwika uye kune avo zvakare vane maAirPod chokwadi ndechekuti zvichave zvakanaka kusarudza avo vavanoda maartist, nziyo, zvinyorwa kana zvakafanana.
Zvinotaridza sekuti nenzira iyi Spotify neApple vari padhuze kupfuura nakare kese uye kuti mwedzi mishoma yapfuura hapana munhu angadai akataura kuti izvi zvinogoneka, asi chokwadika, zvinoitika kuti maawa mashoma apfuura zvaizivikanwa kuti kambani yeCupertino yakabvisa iyo 30% Commission kubva kumasevhisi anovandudza kuenderana ne Apple zvigadzirwa nemasevhisi, saka inopa chikafu chekufunga.
Chero zvazvingava, mubatsiri mukuru weizvi achave mushandisi weSpotify iye, uyo zvakare ane Apple Watch uye zvino anoona sechinhu chave kubvunza kwenguva yakareba uye icho chaaida kuwedzera kuti ndiko kutsigirwa kwaSiri, yakasvika . Tine chokwadi chekuti Apple inofanirwa kugadzirisa zvinhu zveApple Music uye ikozvino nekubatanidzwa kutsva kwe "makwikwi" sechimwe chikonzero chayo, saka tinotarisira kuti WWDC iine imwe nongedzo yakananga kune yayo Apple Music sevhisi sevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Spotify ikozvino inotsigira Siri paApple Watch
Tile yakatsamwira Apple nezve iko pedyo kusvika kweAirTag